20 Qodobbada Salaadda ee Fikradaha ka-hortagga dabiiciga ah | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 20 Qodobbada Salaadda ee Fikirka Muujinta Awoodaha
1 Samuu'eel 1:19:
19 Markaasay aroor hore kaceen, oo Rabbiga caabudeen, dabadeedna way noqdeen, oo yimaadeen gurigoodii Raamaah ku yiil; markaasaa Elqaanaah u tegey naagtiisii ​​Xannaah; oo Rabbiguna iyadii wuu xusuustay.
Inta uu Rabbiga nool yahay !!!, waxaad uraysan doontaa sagaal bilood hadda laga bilaabo magaca Ciise. Taasi waa baryootankayga qof kasta oo akhrinaya maqaalkan, kaasoo Ilaahay rumeysan midhaha dhalmada. Waxaan soo ururiyey 20-kan dhibic ee salaadda ee rimidda ka sarraysa si aan kuugu hago adiga markaad dhibtoonaysid salaadda si aad u keentid Samuelaga ama in ka badan. Ishacyaah 66: 6-8 wuxuu inoo sheegayaa in isla markii ay Siyoon foolatay ay umushay. Sida dumarku u foolanayaan foosha oo kale, waa inaad ku fooshaa tukashada salaadda si aad uur yeelatid oo aad u yeelatid waxyaalaha khilaaf kasta oo jira. Ma aqaano ama dan kama lihi waxa ay dhakhaatiirtu kuu sheegi karaan, ama wixii aad horey u sameysay ee laga yaabo inay saameeyeen uurkaaga, waxaan u adeegnaa ilaahey naxariis iyo waliba mucjiso ilaah ku shaqeysa U soo ducee dhibcaha salaaddan maanta, noqo mid fila oo eeg markhaatifurkaaga oo kuu imanaya.
Ma jiro Ilmo Ilaah loo oggolaaday inuu madhalays noqdo, madhalaysnimadu waa habaar, oo ilmo kasta oo Ilaah baa laga xoreeyay wax kasta habaar Ibliisku. Waa inaad diiddaa madhalaysnimada noloshaada, waa inaad barido Ilaaha miro dhal si aad wax uga qabatid adiga guurka. Rabbiga Ilaaheenna ah ayaa leh go'aanka ugu dambeeya, ereygiisu waa ka awood badan yahay dhakhaatiir kasta oo ay sheegaan, ama xukun shaydaan. Markaad ku mashquulsan tahay qodobadan salaadda ee rimidda ka sarraysa, waxaan arkayaa Ilaahay oo furaya uurkaaga oo kuu sababaya inaad isla markiiba uur ku yeelato magaca Ciise. Xitaa haddii aadan uur lahayn, waxaan arkaa Ilaaha aan u adeegno, oo beddelaya xubin kasta oo jirkaaga ka maqan oo haddana kaa yeelaya, taas oo kuu horseedaysa uurkaaga ka sarraysa. Dhibcaha baryadaani waa adiga, ha ka quusan Ilaah, maxaa yeelay waligiis kuma quusan doono. Firfircoon rumaysadka aad isaga ku qabto inta aad ku tukaneysid dhibcaha tukashada. Kani waa waqtigaagii. Allaha ku barakeeyo.
1. Aabo, waxaan amrayaa soo celinta Toddoba jeer wax kasta oo cadowgu iga xaday nolosheyda, Magaca Ciise.
2. Waxaan tirtirayaa dhammaan riyooyinkii, riyooyinkiisii, iyo shaydaankii Shaydaanka, iyo habaarkii uu ka soo horjeeday rimidda iyo ilmo ku dhashay noloshayda, magaca Ciise.
3. Waxaan tirtirayaa fikradaha sheydaanka ah oo dhan kasta ah ee ku saabsan fekerkeyga magaca Ciise.
4. Sayidow, xooggaaga bogsashada ha u daaro meel kasta oo ka mid ah jirkayga oo quseysa uur qaadista iyo cunugga ku dhasha magaca Ciise.
5. Ilaaha soo nooleeya kuwii dhintay, wax kasta oo ku saabsan uurkayga iyo kan dhalmada ku soo bixiya, magaca Ciise.
6. Anigu waan xidhaan, waan dhacayaa, oo ugudambaynayaa, wax kasta oo jinni ahaana waa la dagaallamaya nabadgelyada gurigayga, oo magaca Ciise.
7. Aabo, waxaan u daayaa malaa'igahaaga dagaalka si ay u eryaan dhamaan kuwa i caasiyooba magaca Ciise.
8. Sayidow, bishaan ha ahaado bisha fikirka aan dabiiciga ahayn ee magaca Ciise
9. Ilmahaygu ha ku daahiriyo dabka Ruuxa Quduuska ah, magaca Ciise.
10. Gacmaha oo dhan gacmahaaga ha laga fogeeyo welwelkayga weligood, magaca Ciise.
11. Waxaan isku daboolaa dhiigga Ciise.
12. Waxaan jebiyaa axdi kasta oo jin kasta oo jinsi ah, magaca Ciise.
13. Waxaan canaantaa ruuxa dhicis ah oo waxaan ka tuuray jidadkayga, magaca Ciise.
14. Meel uur ah dab ku dheji uurkayga dhexdiisa magaca Ciise
15. U soo ducee in malaa'igaha adeegaya ay igu hareereeyaan fikradayda illaa ay ka gaarayaan bixinta badbaadada iyo magaca Ciise
16. Waxaan ku abaal mariyey naftayda mar kasta ama marxaladda caadiga ah ee ka hortagga uurka, magaca Ciise.
17. dabka Ilaahay ha daahiriyo dhamaan nidaamka jirkayga iyo ka saar waxyaabaha xumaanta, magaca Ciise.
18. Waxaan jebin doonaa axdi kasta oo dib u dhaca markaan ku dhasho dabka Ilaah iyo dhiigga Ciise.
19. Waan iska fogeeyaa oo dhaleeceynayaa ruux kasta oo shar leh anigoo adeegsanaya figradaha iga gees ah magaca Ciise.
20. Aabe, waad ku mahadsan tahay sida ugu dhaqsiyo badan salaadadayda ugaga jawaab magaca Ciise.
article Previous20 Salaadda Caddaanka ee Awoodaha Aabayaasha
Next article20 Salaada cibaadada oo ka dhan ah jinniyooyinka abtirsiinta
Ayuba Yusuf July 30, 2021 Saacadu markay ahayd 2:15 pm
Ilaah waa wanaagsan yahay
Salaada ka dhanka ah cadawga reerka aan toobad keenin
Qodobbada Salaadda ee La Soo Celinta Caafimaadka
70 Dhibcood oo Ducada looga Hor tago Ciidamada Naarta